चीन थोक फाउन्डेशन मेकअप कस्टम भेगन फाउन्डेशनले आफ्नै लोगो कार्बनिक फाउन्डेशन निजी लेबल कारखाना र आपूर्तिकर्ता बनाउँदछ आइरिस ब्यूटी
थोक फाउन्डेशन मेकअप कस्टम भेगन फाउन्डेशनले आफ्नै लोगो कार्बनिक फाउन्डेशन निजी लेबल बनाउँदछ
सर्वोच्च कभरेज र म्याट समाप्तको साथ एक हल्का फाउन्डेशन। पूर्ण कभरेजले दिनभरि तपाईंको रंगको चमक र परिमार्जन गर्न पनि काम गर्दछ। तर यो त्यहाँ रोकिदैन: यो क्लासिक आधार सामान्य, तेल, संयोजन, र संवेदनशील छाला प्रकारका लागि उपयुक्त छ।
तरल फाउन्डेशनको राम्रो र नरम बनावट, राम्रो एक्स्टेन्सिबिलिटी, टाढा धकेल्न सजिलो, क्लम्प नगर्नुहोस्, र पूरा कभरेज प्रदान गर्दछ। यसले प्रभावी रूपमा छाला दोषहरू ढाक्न सक्छ जस्तै एक्ने दाग, अनुहारमा कालो दाग, आँखामुनि कालो घेरा, असमान छाला टोन र विस्तारित प्वालहरू। रंग उज्यालो र सुन्दर बनाउँदछ, छाला पूर्ण प्राकृतिक देखिन्छ।
तरल फाउन्डेशनको एक मॉइस्चराइजिंग र पानी लक गर्ने कार्य छ। यसले सेतो र मोइस्चराइजिंग र मर्मत गर्ने सामग्री समावेश गर्दछ छालाको रक्षा गर्नका लागि, ठीक रेखाहरू र झिम्का ढाक्न, र तपाईंको छालालाई अझ उत्तम देखिने बनाउँदछ।
लामो-चिरस्थायी, वाटरप्रूफ, र पसिना प्रूफ सूत्रले तपाईंलाई दिनभर चिरस्थायी सौन्दर्य श्रृंगार कायम राख्न अनुमति दिन्छ। लाइटवेट फाउंडेशन केयरले चमक बढाउन, छालाको टोनलाई उज्यालो पार्न र छालालाई सिल्की स्मूद बनाउन सक्छ। पोर्टेबल डिजाइन, नौसिखाहरूले सजिलै प्रयोग गर्न सक्दछन्, विभिन्न छाला टोनका महिलाहरूका लागि उपयुक्त।
वस्तुको नाम फाउन्डेशन
२. भेगन / पराबेन निःशुल्क / तेल मुक्त
Long. लामो चिरस्थायी र वाटरप्रूफ
Smo. महीन, पूर्ण कभरेज
सबै छालाका प्रकारहरूका लागि
MOQ १००० पीसीएस
२. प्रश्न: फाउन्डेशनका लागि तपाईंसँग कति रंगहरू छन्?
A: फाउन्डेसन कलरहरू हामीसँग छनौटका लागि हामीसँग colors० रंग छन्, हामी तपाईंको आफ्नै रंगहरू पनि अनुकूलित गर्न सक्छौं।
3.Q: म कसरी आफ्नो गुणवत्ता जाँच गर्न को लागी एक नमूना प्राप्त गर्न सक्छ?
4.Q: के तपाइँ OEM लाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? ODM र तपाईं हाम्रो लागि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ?
5.Q: म नमुना प्राप्त गर्न कहिलेसम्म आशा गर्न सक्दछु?
6.Q: ठूलो उत्पादनको लागि नेतृत्व समयको बारेमा के छ?
7.Q: तपाईंको भुक्तानी सर्तहरू के हो?
Q.Q: हामीलाई कसरी सम्पर्क राख्ने?
A: हामी तपाईंसँग कुनै प्रश्न वा प्रतिक्रियाको साथ मद्दत गर्न चाहन्छौं!
अघिल्लो: कस्टम फाउन्डेशन निजी लेबल मैट फाउन्डेशन पूर्ण कभरेज भेगन फाउन्डेशन विक्रेताहरू
अर्को: उच्च गुणवत्ता फाउन्डेशन तरल पूर्ण कभरेज नीजि निजी लेबल वाटरप्रूफ मेकअप फाउन्डेशन तरल
मेकअप आधार निजी लेबल
जैविक आधार श्रृंगार
जैविक आधार निजी लेबल
भेगन फाउन्डेशनले आफ्नै लोगो बनाउँछ
थोक फाउन्डेशन मेकअप कस्टम
हाइलाइटर मेकअप विक्रेता कस्मेटिक बिना लोगो उच्च ...
शाकाहारी हाइलाइटर निजी लेबल मेकअप कस्टम एच ​​...
उच्च गुणस्तर फाउण्डेशन तरल पूर्ण कभरेज ...
कस्टम फाउंडेशन निजी लेबल मैट फाउंडियो ...
OEM फेस फाउन्डेशन मेकअप तरल थोक cus ...
भेगन इको मेकअप रिमूभर तेल हाइड्रेटिंग निजी ...